Ngokuthuthuka okuqhubekayo kokuqwashisa komphakathi ngamagciwane asekhaya, ukusetshenziswa okuhlakaniphile kwemikhiqizo yokubulala amagciwane sekuyindlela eshisayo yamanje. Izandla ziyizingxenye ezivame kakhulu zokuthinta zonke izinhlobo zamagciwane, ngakho-ke ukubaluleka kokugeza izandla kungubufakazi ...
Isibhamu se-fascia, esaziwa nangokuthi ithuluzi lokujula le-myofascial deep, iyithuluzi lokuthambisa lezicubu ezithambile eliyekelela izicubu ezithambile zomzimba ngokufaka umfutho ophakeme kakhulu. Isibhamu se-fascia singacatshangwa njengenguqulo yomphakathi ye-DMS (Electric Deep Muscle Stimulator). I-vi ...
Empilweni yansuku zonke, i-sanitizer yezandla uhlobo lokuhlanza ukunakekelwa kwesikhumba okusetshenziselwa ukuhlanza izandla. Ezinye izithako ezithile zingadlala indima ekuqedeni amagciwane kanye nokubulala amagciwane esikhunjeni. Ukwenza kube lula ukugcina nokusebenzisa izinto zokuhlanza izandla, abantu bazifaka emishinini yokuhambisa insipho. Abahambisa insipho abajwayelekile ...